Orinasa miorina amin'ny bobongolo tsy misy sandry any Sina | HEYA
Heya Mould dia mpamokatra lasitra matihanina amin'ny famolavolana sy fanaovana lasitra seza tsy misy sandry. Ho an'ny fomban'ny seza, ny bobongolo seza dia ahitana ny fomba nentim-paharazana sy ny endriny manokana, toy ny bobongolo amin'ny seza plastika rattan, bobongolo tsindrona seza ivelany, bobongolo seza plastika azo raisina, mpanamboatra bobongolo tsindrona seza,
Anaran'ny vokatra Lasitra seza tsy misy sandry
F: Mandra-pahoviana ny ora fanaterana bobongolo anao?
A: Miankina amin'ny firafitry ny bobongolo sy ny habeny.
Amin'ny ankapobeny dia 3 ~ 15 andro ho an'ny famolavolana bobongolo izany, ary 15 ~ 60 andro ho an'ny famokarana bobongolo aorian'ny nahazoan'ny Heya Mould ny vola napetrakao sy ny fanamafisana ny endrika famolavolana.
Previous: Bobongolo seza amoron-dranomasina
Manaraka: Bobongolo vera divay